Link: Eat, Love, Kill – Gold Channel Movies
Jun. 06, 2022 tvN
Episode 1 Jun. 06, 2022
Episode2Jun. 07, 2022
Episode3Jun. 13, 2022
Episode4Jun. 14, 2022
Episode5Jun. 20, 2022
Episode6Jun. 21, 2022
Link: Eat, Love, Kill (링크: 먹고 사랑하라, 죽이게)
ကလေးသရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးရဲ့ လူကြီးသရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းကြမယ့် tvN ရဲ့ Link:Eat, Love, Kill ဆိုတဲ့ Fantasy mystery ဒရာမာကားကောင်းလေးကို GC ချစ်သူတိုအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
Eun Kye-Hoon( Yeo Jin-Goo) ဟာ စားဖိုမှူးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အမြွှာအစ်မဖြစ်သူကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ခန့်က ပျောက်ဆုံးလျက် ရှိနေပါတယ်။ Kye-Hoon ဟာ သူ့အစ်မ ပျောက်သွားတဲ့နေရာမှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ဖို ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူဟာ Noh Da-Hyun (Moon Ga-Young) ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ နာကျင်မှုတွေကို မျှဝေခံစားနေမိတယ်ဆိုတာကို သိရှိလိုက်ရပါတော့တယ်။
Da-Hyun ကတော့ အပြုံးတစ်ခုကိုသာဆောင်ထားလိုက်ရင် အရာရာမှာ ကံကောင်းလိမ့်မယ်လို ယုံကြည်ထားတဲ့သူပါ။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ အလုပ်ရှာဖွေလျက်ရှိပြီး အစစအရာရာ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အကြီးအကျယ် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတတ်တဲ့သူပါ။
ဒီလူသားနှစ်ယောက်ကြားက ဆန်းကြယ်တဲ့ကံကြမ္မာက ဘာဖြစ်မလဲ။ တိမ်မြှုပ်နေတဲ့လျှိဝှက်ချက်တွေက ဘာလဲ။ သူတိုနှစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုအရာတွေက ဆက်သွယ်ပေးထားကြလဲဆိုတာတွေကို ရင်တဖိုဖိုနဲ့ စောင့်ကြည့်ခံစားရမှာပါ။
Fantasy Mystery ကားဖြစ်ပြီး ဇာတ်အသွားလေးကလည်း တစ်မျိုးလေးဆန်းတာမို GCverse လေးတွေ အကြိုက်တွေ့မယ်လို ယုံကြည်ပါတယ်။ အရိုတစ်လိုင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့ကြည့်ရမယ့်ကားမို Mystery ကြိုက်သူတွေအတွက်လည်း လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ကားကောင်းပါပဲ။ အပတ်စဥ် အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာ GC Drama မှ အကောင်းဆုံးတင်ဆက်သွားမှာမို စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်။
Translated by Winnie Ngoon
Encoder : AJ18
Victor KhaiJune 22, 2022Reply
EPISODE –6please 🥺